ဟွာဝေးက အန်းဒရွိုက်ဗားရှင်းဖြစ်တဲ့ IdeaHub ဘုတ်၊ HarmonyOS နဲ့ Windows တို့နဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင် - Pandaily
ဟွာဝေးက အန်းဒရွိုက်ဗားရှင်းဖြစ်တဲ့ IdeaHub ဘုတ်၊ HarmonyOS နဲ့ Windows တို့နဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်
Categories: Industry ကိုXiaodan Xi မတ် 18, 2021 မတ် 18, 2021 မှာ Posted
တရုတ်နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီး ဟွာဝေးက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ထုတ်ပြန်တဲ့ IdeaHub ဘုတ်မှာ အဖြူရောင်ပန်းကန်ပြားကို စမတ်ရုံးနဲ့ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုပိုင်းမှာ ကြိုးမဲ့ပရိုဂျက်တာတွေနဲ့ Smart Writing တွေအပါအဝင် အသုံးပြုသူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို တိုးမြှင့်ပေးဖို့အတွက် အပြန်အလှန်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့ အလုပ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့အောက်ပိုင်းပရိုဂျက်တာပိုင်းမှာ Cast+ နည်းပညာကို အခြေပြုပြီး သုံးစွဲသူတွေကို ဖုန်းထဲက အကြောင်းအရာတွေကို ဆွဲယူခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပြီး စခရင်ပေါ်မှာ ပရိုဂျက်တာအကြီးကြီးတွေထည့်သွင်းစရာမလိုဘဲ တခြားအက်ပ်တွေကို အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ဖုန်းစခရင်ကို ကြီးမားစွာထိန်းချုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးIdeaHub က ပရိုဂျက်တာအတွင်း သတင်းအချက်အလက်တွေကို ထိခိုက်စေနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
စာေရးသားရာမွာ အေတြ႕ အႀကံဳကို ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ ဖန္တီးႏိုင္ဖို႔၊ IdeaHub ဘုတ္ျပားကို Zero Clear Button ကို အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔နဲ႔ တီထြင္ဆန္းသစ္ထားတဲ့ ေဆာ့ဖ္၀ဲရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို 35 ms က ေပးစြမ္းႏိုင္တာေၾကာင့္ Ultra ကို ေႏွာင့္ေႏွးေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာပိုဒ္မွာ ေရးထားတဲ့ စာပိုဒ္မွာ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ ေရးထားတဲ့ စာပိုဒ္မွာ ပါရွိတဲ့ စာပိုဒ္ကို အသိဉာဏ္နဲ႔ ဂရပ္ဖစ္တီအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားမွာ ျဖစ္သလို အီးေမးလ္ Share လုပ္ရာမွာ အားသာခ်က္ေတြလည္း ပါရွိၿပီး စာပိုဒ္ေပၚမွာ ပါတဲ့ စာပိုဒ္ေတြ ပါရွိတဲ့ စာပိုဒ္ဟာ ႐ုိးရာ အျဖဴေရာင္ ပန္းကန္ျပားကို အသံုးျပဳထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ပရိုဂျက်တာမှာ ပြထားတဲ့ ပုံတွေက အဖြူရောင် ပန်းကန်ပြားတွေ ဖြစ်ပြီး အဲဒီပုံတွေက သက်သက်ရေးထားတဲ့ စကားလုံးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟွာဝေးရဲ့ ဘုတ်အဖွဲ့ကတော့ စခရင်ကိုအသုံးပြုပြီးလုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားပြီး အဝေးထိန်း ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွေအပါအဝင် feature အမျိုးမျိုးကို လက်ငင်းမျှဝေသုံးစွဲမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Topics: မြင်ကွင်းဟွာဝေးက အက်ပဲလ်နဲ့ ဆမ်ဆောင်းကို သူ့ရဲ့ Wireless 5G မူပိုင်ကြေး ကောက်ခံမည်
ဒါဟာ ပထမဆုံး Optical Blue Blue Light နည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ အပြာရောင်နဲ့ ဘက်လိုက်မှုကင်းတဲ့ အရောင်တွေကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ဖန်တီးထားတဲ့ အမြင်အာရုံ ခံစားမှုကို ရရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်ကနေ အမြင်အာရုံကို လိုက်ရှာတဲ့ အခါကျတော့ ကျနော်တို့ ဒီဂျစ်တယ် စခရင်ပေါ်မှာ မှီခိုနေရတဲ့အပေါ်မှာ စိုးရိမ်မှုတွေ ပိုများလာတယ်။
Huawei Smart and Cooperation ၏ ဥကၠ႒ Sun Right က မၾကာေသးမီက ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ကပ္ေရာဂါဆိုးႀကီးေနာက္ပိုင္း ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ခင္တြယ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဟွာဝေးရဲ့ စီးပွားရေးမဟာဗျူ ဟာကတော့ “မိုးတိမ်တောင်နဲ့ ကွင်းပြင်၊ ကွင်းပြင်၊ ဉာဏ်ပညာနဲ့ ရုံးခန်း ဂေဟစနစ်” အပြည့်အစုံ တည်ဆောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲသည်မှာ ဟွာဝေးက Cloud နဲ့ HarmoneyOS ကို ချိတ်ဆက်ပြီး Eco-government smart features တွေ ပြည့်စုံကြွယ်ဝတဲ့ ထုတ်ကုန်တွေနဲ့ One Stop Solutions တွေကို အသုံးပြုသူတွေအတွက် ကုမဏီအားလုံးရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ပညာေရးနယ္ပယ္တြင္ ခိုင္မာေသာ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ စိန္ေခၚမႈ အနည္းငယ္မွ်သာ ရွိေသာေၾကာင့္ ႐ိုးရာမဟုတ္ေသာ စမတ္ကိရိယာမ်ားျဖစ္သည့္ ပ႐ိုဂ်က္တာမ်ား၊ White Cards ႏွင့္ Event Pen တို႔က စာသင္ခန္းမ်ားကို လႊမ္းမိုးထားဆဲျဖစ္သည္။ Ji Co Product Line VP ဟာ Kit Kat Minh ဆိုတဲ့ လူအချင်းချင်း ပညာပေးတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ ဗဟုဝါဒကိုလိုချင်တာပါ။ သူ႔အျမင္ကေတာ့ ဒီစာရြက္က ဦးထြန္းလင္းတို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းလိုက္တာပဲေလ။ အနာဂတ်မှာ ဘက်စုံသုံး smart tools တွေ အစားထိုးနိုင်တဲ့ ပရိုဂျက်တာ အကြီးစားတွေ ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပျံ့နှံ့မှုကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်လုပ်ဆောင်နေတာကြောင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်သင်ကြားမှု၊ ရုံးခန်းနဲ့ သင်ကြားမှုစတဲ့ မြင်ကွင်းတွေဟာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နဲ့ဆက်ဆံရာမှာ ပိုမိုအဆင်ပြေစေဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။
IdeaHub ဘုတ်က လက်ရှိမှာ အန်းဒရွိုက်စနစ်ကိုသာ ထောက်ပံ့ထားပေမဲ့ မကြာခင်မှာတော့ HarmonyOS ကို သင့်တော်မယ့် တရုတ်နိုင်ငံထုတ် HUKEGAS လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒါဟာ Huawei ရဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အတွင်းရေးဖန်တီးမှုနဲ့ nbsp;အေမရိကန္၏ ပို႔ကုန္ပိတ္ပင္မႈေၾကာင့္ ကုမၸဏီအမ်ားစုႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေတာက္သြားသည္ဟု Chip and Software ေရာင္းခ်သူမ်ား ေျပာအဲ့ဒီ့ေတာ့ လြတ္လပ္ေရးဆိုတာလည္း သေဘာေပါက္ၾကၿပီေလ။
HarmonyOS ဟာ IoT ကို တီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခုဆိုရင် HarmonyOS ဟာ Platform Multi-Operating System ကို အသုံးပြုထားပြီး စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်နဲ့ လက်ပ်တော့တွေမှာ အန်းဒရွိုက်ထက် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမြန်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ·
အနာဂတ်မှာ IdeaHub ဘုတ်က Windows အသုံးပြုသူတွေအတွက် ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
မော်ဒယ်နှစ်မျိုးကို ၆၅’၈၆” ‘ နဲ့ ၈၆’နှစ်မျိုး ရွေးချယ်နိုင်ပြီး၊ ဈေးနှုန်းကတော့ ၁၄၉၉၉ ယွမ်နဲ့ ၃၉၉၉၉၉၉ ယွမ်အသီးသီးရှိပြီး Huawei IdeaHub ဘုတ်၊ ကြမ်းခင်းနဲ့ နံရံကပ်ကြိုးတပ်ဆင်မှုတွေအတွက် မတ်လ ၁၇ ရက် နေ့ကစတင်ပြီး ပြည်တွင်းမှာ စတင်ရောင်းချမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Tags: ∗huawei | android | Harmony OS | huawei ideahub board | Windows
ကိုPandaily Jan 28 Jan 28 မှာ Posted
Xiaomi တည်ထောင်သူ Lei Jun သည် Xiaomi လက်အောက်ခံ ဥက္က chairman ္ဌ ရာထူးမှ နုတ်ထွက် ခဲ့သည်
တရုတ် တယ်လီ ကွန်း ကုမ္ပဏီကြီး တည်ထောင်သူ Tianyancha App ရဲ့ အဆိုအရXiaomiLei Jun သည် မကြာသေးမီက ပေကျင်း ဥက္က chairman ္ဌ ရာထူးမှ နုတ်ထွက် ခဲ့သည်Xiaomiအပြည့်အဝ ပိုင် ဆိုင်သော အီလက်ထရောနစ် ထုတ်ကုန် ကုမ္ပဏီလီမိတက်Xiaomiဟောင်ကောင် ။ အကန္႔အသတ္ ရွိတယ္။
Hichain ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Tencent တိမ်တိုက် နှင့် Digitforce ထောက်ပံ့ရေး ကွင်းဆက် SaaS နှင့်အတူ ပူးပေါင်း
တရုတ် နည်းပညာ စက်မှုလုပ်ငန်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် သိုလှောင်ရုံ ကုမ္ပဏီ Hichain Logistics က သောကြာနေ့ မွန်းတည့် အချိန်၌ ကြေငြာ ခဲ့သည်TencentCloud နှင့် Digitforce, စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဒစ်ဂျစ်တယ် ဖြေရှင်းချက် ပေး သူ ။
BYD Semiconductor ၏ IPO လျှောက်လွှာ ကို တရုတ် စတော့အိတ်ချိန်း မှအတည်ပြု သည်
အလားအလာ အရ ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် ယွမ် ၂. ၆ ၈၆ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၄ ၂၂. ၅ သန်း) ကိုမြှင့်တင် ရန်စီစဉ်ထားသည်။
Tencent၎င်း၏ streaming ပလက်ဖောင်း တစ်ခု ပုဂ္ဂလိကပိုင် ဖို့ စီစဉ် နေ ပါတယ်Betta ငါးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူ့ရဲ့ အမှုဆောင်အရာရှိ တွေဟာ မဟာဗျူဟာ ကျကျ ကွဲပြား နေလို့ ပဲ။